लामो समय याैनसम्पर्क नगर्दा शरीरमा यतो समस्या आउछ ? |लामो समय याैनसम्पर्क नगर्दा शरीरमा यतो समस्या आउछ ? – हिपमत
लामो समय याैनसम्पर्क नगर्दा शरीरमा यतो समस्या आउछ ?
कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ कि लामो समयसम्म शारि/रीक सुखभो/ग नराख्दा शरीरमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेर ? यदि तपाईंले लामो समयसम्म शारि/रीक सुख/भो/ग राख्नुभएको छैन भने तपाईंको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउन सक्छन् । तर, तपाईंलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि यस्तो परिवर्तन लामो समय सम्पर्क नगर्दा भएको हो भनेर ।
स’म्बन्धमा तितोपना : कुनै समय तपाईं आफ्नो पार्टन या जीवनसाथीसँग खुलेर बोल्न सकिरहनुभएको हुँदैन । कुनै कुरा भन्न चाहनुहुन्छ, तर भन्न सकिरहनुभएको हुँदैन । अर्थात् तपाईंहरु दुईजना बीच राम्रो सम्ब’न्ध छैन । यसको एक प्रमुख कारण लामो समय शा/रिरीक सु/खभो’ग नहुनु पनि हो । खासगरेर पति–पत्नीबीच यस्तो सम’स्या बढी देखिन्छ । लामो समय शारि-रीक सुख-भो’ग नहुँदा पति–पत्नीको सम्बन्धमा नै असर पर्न सक्छ ।
का-मेच्छामा परिवर्तन : लामो समयसम्म शारिरी’क सु-खभो’ग नगर्दा तपाईंमा हुने अर्को परिवर्तन हो, कामे-च्छासँग सम्बन्धित । लामो समयसँग शारि’रीक सुखभो’ग नगरेका व्यक्तिमध्ये कसैमा धेरै कामे-च्छा जागृत हुन्छ भने कुनै व्यक्तिमा धेरै घटेर जान्छ ।
थका’न महसूस : तपाईंलाई धेरै थ-काइ लाग्छ भने यसको एक कारण लामो समयसम्म शारि’रीक सु-खभो’ग नगर्नु पनि एक हुन सक्छ । अर्थात् नियमित शा-रिरीक सु-खभो’ग गर्ने व्यक्तिले लामो समयसम्म शारि’रीक सुखभो’ग गरेनन् भने यस्ता व्यक्तिमा मान-सिक दवा’व र थकान महसूस हुने संभावना बढेर जान्छ ।
निद्रा नलाग्ने : लामो समयसम्म शारि’रीक सुखभो-ग नगरेका व्यक्तिमा देखिने प्रमुख स’मस्यामध्ये एक हो, निद्रा नलाग्नु । यदि लामो समयसम्म शारिरीक सुखभोग नगर्दा राति निद्रा नलाग्ने सम’स्या देखिन सक्छ ।
रो’गप्रति-रोधात्मक क्षमतामा कमि : तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ कि, तपाईंको सामान्य रु-घा–खो-की कहिलेकाहीँ शा/रिरीक सुखभो’/ग गर्दा नै ठीक हुन सक्छ । शारि’रीक सुखभो’गले तपाईंलाई शारि-रीकसँगै मा-नसिक रुपमा पनि सक्रिय बनाउँछ, यस्तो अ’वस्थामा तपाईंमा इम्युनिटी पावर बढेर जान्छ । जसका कारण सामान्य खोले बिमा’रीबाट शारि’रीक सु-खभो’ग गर्दा पनि छुट्करा पाइन्छ । तर, तपाईंले लामो समयसम्म शारि’रीक सु-खभो’ग गर्नुभएको छैन भने तपाईंलाई सामान्य बिमा’री रु’घा–खो’कीबाट मुक्ति पाउन पनि औ’षधि लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
गो-प्य अ-ङ्गमा सं-क्रमण : तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि, लामो समय शारि’रीक सुखभो’ग नगर्दा तपाईंको गो-प्य अं-ग मा सं-क्रमण हुन्छ भनेर, तर एक रिसर्चले यसलाई प्रमाणित गरेको छ । लामो समयसम्म शा-रि’रीक सु-ख’भो’ग नगर्नु भनको यौ ना’ङ्गको सक्रियता कम हुनु हो । सक्रिय हुन नपाएपछि यौ ना’ङ्ग कमजोर हुन्छ । एक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म शा’रिरीक सु-खभो’ग नगर्ने महिलाको यौ ना’ङ्गको छाला कम’जोर र पातलो हुन जान्छ । जसले गर्दा यौ ना’ङ्गमा सं-क्रमण हुने ख’तरा पनि बढी हुन्छ ।